स्वास्थ्य खबर – Page6– rastriyakhabar.com
नेपालमा पछिल्लो २४ घण्टामा ४,३६४ कोरोना संक्रमित थपिए
शुक्रबार, अशोज २३, २०७७ मा प्रकाशित
काठमाडौं । नेपालमा पछिल्लो २४ घण्टामा थप ४,३६४ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ । योसँगै कोरोना संक्रमितको संख्या ९८ हजार ६१७ पुगेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले विहीबार नियमित लाइभ अपडेटमा उक्त जानकारी दिएका हुन् । मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा..
अनसनरत डा. केसीसँग वार्ता गर्न सरकारद्वारा टोली गठन
काठमाडौं। २४ दिनदेखि अनसनरत डा. गोविन्द केसीसँग वार्ता गर्न सरकारले वार्ता टोली गठन गरेको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीको संयोजकत्वमा गठित वार्ता टोलीमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहसचिव डा. गुणराज लोहनी र चिकित्सा शिक्षा आयोगका निर्देशक दिलिप शर्मा..
२४ घण्टामा काठमाडौं उपत्यकामा थपिए १,०१७ कोरोना संक्रमित
बुधबार, अशोज २१, २०७७ मा प्रकाशित
काठमाडौं। काठमाडौं उपत्यकामा पछिल्लो २४ घण्टामा थप १,०१७ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौंमा ७८३, ललितपुरमा ११८ र भक्तपुरमा ११६ जना गरी जम्मा १,०१७ जना संक्रमित थपिएका छन् । यसअघि सोमबार (हिजो) काठमाडौंमा १ हजार १७८, ललितपुरमा २५० र भक्तपुरमा..
काठमाडौं उपत्यकामा १,५३१ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा कोरोना संक्रमणको संख्या बढ्दै गएको छ । पछिल्लो २४ घन्टामा १ हजार ५ सय ३१ जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौंमा १ हजार १ सय ७८ जना, भक्तपुरमा १ सय ३ जना र ललितपुरमा २५० जनासहित उपत्यकामा १ हजार ५ सय ३१..
बूढानीलकण्ठका मेयर खरेललाई कोरोना पुष्टि
आइतवार, अशोज १८, २०७७ मा प्रकाशित
काठमाडौं । बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाका नगर प्रमुख उद्धवप्रसाद खरेललाई कोभिड–१९ सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ । पीसीआर विधिबाट शुक्रबार खरेलको कोरोना परीक्षण गरिएकोमा शनिबार खरेलको रिपोर्ट पोजेटिभ आएको नगरपालिकाले जानकारी दिएको छ । मेयर खरेलका सवारी चालकलाई ५ दिनअघि कोरोना पोजेटिभ देखिएको थियो ।..
पछिल्लो २४ घण्टामा अहिलेसम्मकै धेरै ३३०७ जनाले जिते कोरोना
शनिबार, अशोज १७, २०७७ मा प्रकाशित
काठमाडौं । नेपालमा कोरोना भाइरसको नयाँ संक्रमणसँगै संक्रमणमुक्त हुनेहरुको संख्या पनि बढेको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा देशभर ३ हजार ३ सय ७ जना संक्रमणमुक्त भएका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले थप ३ हजार ३ सय ७ जना संक्रमणमुक्त..
शुक्रबार, अशोज १६, २०७७ मा प्रकाशित
काठमाडौं । सरकारले १८ दिनदेखि आमरण अनसनमा बसेका डा. गोविन्द केसीलाई अनसन तोड्न आग्रह गरेको छ । असामान्य अवस्थामा अनसन बस्न सुहाउने विषय नभएको भन्दै सरकारका प्रवक्ता परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले यस्तो आग्रह गरेका हुन् । बिहिवार मन्त्रिपरिषदका निर्णयहरु सार्वजनिक गर्दै उनले भने, ‘आजमात्रै..
कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या ५ सय नाघ्यो, पछिल्लो २४ घन्टामा ११ जनाको मृत्यु
काठमाडौं । नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या ५ सय नाघेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो २४ घन्टामा ११ जनाको ज्यान गएको छ । नोपलमा कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या ५ सय ९ पुगेको छ..
२४ घन्टामा कोरोना संक्रमणबाट ७ जनाको मृत्यु
बिहिबार, अशोज १५, २०७७ मा प्रकाशित
काठमाडौं । कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट पछिल्लो २४ घन्टामा ७ जनाको ज्यान गएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले विभिन्न जिल्लामा थप ७ जनाको कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गएको जनाएको छ..
काठमाडौं उपत्यकामा पछिल्लो २४ घन्टामा ९०२ जनामा कोरोना संक्रमण
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा कोरोना भाइरसको संक्रमण केन्द्रित भएको छ । देशभरका संक्रमितमध्ये आधा भन्दा धेरै काठमाडौं उपत्यकाका रहेका छन् । पछिल्लो २४ घन्टामा काठमाडौं उपत्यकामा ९ सय २ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार..
उपत्यकामा थप ९३४ जनामा कोरोना संक्रमण, ३ जनाको मृत्यु
बुधबार, अशोज १४, २०७७ मा प्रकाशित
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा देशभरका संक्रमितमध्ये आधाभन्दा धेरै फेला परेका छन् । पछिल्लो २४ घन्टामा ९ सय ३४ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौंमा ७ सय ४७ जना, भक्तपुरमा ७३ जना र ललितपुरमा १ सय १४ जनामा कोरोना भाइरसको..
नेपालमा कोरोनाविरुद्धको २ लाख ५० हजार डोज रुसी भ्याक्सिन ल्याउने सम्झौता
एजेन्सी । नेपालमा रुसमा बनाइएको कोरोना भाइरसविरुद्धको भ्याक्सिन ल्याउने विषयमा सम्झौता भएको छ । सम्झौता अनुसार रुसी भ्याक्सिन स्पुतनिक-५ भ्याक्सिनको २ करोड ५० लाख डोज ल्याइनेछ । द रसियन डाइरेक्ट इन्भेष्टमेन्ट फन्ड (आरडिआइएफ)ले विज्ञप्ति जारी गर्दै ट्रिनिटी फर्मास्युटिकल्ससँग सम्झौता भएको..
पीसीआर रिपोर्ट सम्बन्धित व्यक्तिलाई
काठमाडौं । सबै प्रयोगशालाले अब पीसीआर परीक्षणको रिपोर्ट सम्बधित व्यक्तिलाई दिन पाउने भएका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा जागेश्वर गौतमले पिसिआर परीक्षणको रिर्पोट नेगेटिभ वा पोजेटिभ जे भए पनि सम्बन्धित व्यक्तिलाई दिन प्रयोगशालालाई निर्देशन दिइएको बताए । यसअघि..
काठमाडौं उपत्यकामा ८०९ जनामा कोरोना संक्रमण, ५ जनाको मृत्यु
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा कोरोना संक्रमितको संख्या निरन्तर बढेको छ । पछिल्लो २४ घन्टामा काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लामा ८ सय ९ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो २४ घन्टामा काठमाडौंमा ६ सय ३३ जना, भक्तपुरमा ७२ जना र..
२४ घन्टामा १,२०७ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण
काठमाडौं । नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या निरन्तर बढीरहेको छ । पछिल्लो २४ घन्टामा विभिन्न जिल्लामा १ हजार २ सय ७ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.जागेश्वर गौतमले पछिल्लो २४ घन्टामा थपिएका १ हजार २ सय ७ जनासहित देशभर..
दुप्चेश्वर लगायत नुवाकोटका विभिन्न स्थानमा विरोध सभा
मात्र ७ बर्षकी विश्वको सबैभन्दा शक्तिशाली बालिकाको शक्ति देखेर दुनियाँ चकित
प्रतिनिधिसभा विघटन नभएको भए प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई अहिलेसम्म फ्याकिसक्थे
संसद् विघटन गर्न पाइन्नः नेता थापा
पहिलोपटक नेपालका १० पर्वतारोहीले गरे पाकिस्तानको केटु हिमाल आरोहण
आइतबारदेखि उपत्यकाका विद्यालय खुल्दै, यस्तो छ सुरक्षा मापदण्ड
प्रचण्ड–माधव पक्षले माघ ९ गते काठमाडौंमा प्रदर्शन गर्ने
नोजाका अध्यक्ष मुकुन्द ढुंगाना राज्यमन्त्री द्वारा सम्मानित
संसद्‍ विघटन मुद्दाको टुंगो संवैधानिक इजलासबाटै लगाउने निर्णय
राष्ट्रिय विकास बैठकमा प्रचण्ड-माधव पक्षका २ मुख्यमन्त्री अनुपस्थित !
डेनियल कटवालको डिजाइनमा नीलडेभिड्सको नया“ फ्रेन्चाइजी मोडलको उद्घाटन
सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दामा पार्टीले कुनै दबाब दिँदैन : सभापति देउवा
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा शुक्रबार सुनुवाइ हुँदै
चुनावमा केन्द्रित हुन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
नारायणकाजीको आरोप : ‘अदालत र निर्वाचन आयोगनै ओलीको मिलेमतोमा छ’